मनकारी हरिको फस्टाएको व्यवसाय र चम्किएको समाजसेवा — Motivate News
Posted on July 25, 2016 by motivate news
काठमाण्डौ – आजभोलि समाज सेवामा लाग्नेहरुको भिड देखिन्छ । कालो धनलाई सेता बनाउन समाज सेवाको नाममा धन्दा गर्नेहरुको ताँति पनि कम छैन नेपाली समाजमा । कसैलाई विहान वेलुका छाक टार्न कठिन छ भने कोहि त्यहि गरिविलाई वेचेर मालामाल भएका छन् । धन हुनेलाई अझ धेरै धन थुपार्न बाहेक अरु सोच्ने फुर्सद छैन् । तर धन नभएर पनि मन हुनेहरुले आफ्नो गास कटाएर पनि समाजको सेवा गरेको पाइन्छ । यसको जलन्त उदाहारण हुन् धादिङ कल्लेरी घर भई ललितपूर बस्दैआएका हरि सेन्चुरी । सेन्चुरी पेसाले हस्तकलाका सामाग्रीहरु बनाउने र विदेशमा निर्यात गर्ने काम गर्दछन् । सामान्य दलित परिवारमा जन्मेर हुर्केका उनी समाज सेवामा पनि सकृय छन् । उनै समाज सेवि तथा हस्तकला व्यावसायी सेन्चुरीलाई भेटेर मोटिभेट न्युजका संवादाता मुकुन्द गैरेले एक सामाग्री तयार पारेका छन् । प्रस्तुत छ, सोहि कुराकानीमा आधारीत यो सामग्री ।
हस्तकलाका सामग्री अवलोकन गर्दै सेन्चुरीको पसलमा बिदेशी
हरि सेन्चुरी २०३६ साल साउन १५ गते धादिङको कल्लेरी १ मा एक सामान्य परिवारमा जन्मेका हुन । बाल्यकाल देखी नै तृक्ष्ण दिमाग लगनशील एवं गम्भिर स्वाभाव भएका हरीले श्री सरस्वती नि.मा.वि. डुम्रीचौर विद्यालयबाट आफनो अध्ययन सुरु गरेका थिए । स्व. कृष्ण बहादुर कामी (सेन्चुरी) तथा माता माकुरी कामीको दुई छोरी पछिको जेठो छोराको रुपमा जन्मीएका उनी वुवाको पुर्खेउली पेसालाई सम्हाल्दै अगाडी बढे । दुई सन्तानका वुबा हरीले छोरा संघर्षशिल र परिश्रमी बनुन भन्ने चाहान्छन ।
उनी आफ्ना सन्तानले स्वदेश तथा विदेशबाट आर्जित शिक्षा, सीप, अरुको मुलुकमा गएर बगाउने होईन नेपालमै बसेर आफुले सिकेको शिक्षा र सिपलाई स्वदेशमै नेपाली माटोमै बगाउन भन्ने चाहान्छन् । उनको सम्पूर्ण परिवार व्यापार व्यावसायमा सकृय भएकाले उनले पनि बुवाको पेसालाई निरन्तरता दिए । र अहिले उनको परिवारले पनि त्यो पेसालाई निरन्तरता दिएको छ । आफ्नो हस्तकला व्यावसायमा क्रियाशिल हरी सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यतिकै क्रियाशिल हुदै आएका छन् । हाल उनी ग्लोवल सेन्चुरी हयाण्डिक्रापटका संचालक तथा महाप्रबन्धक भएर बसेका छन् ।
विदेशमा सम्मान ग्रहण गर्दै सेन्चुरी
जिन्दगी सफल या असफल हुनमा त्याग तपस्या र इमान्दारीताको भुमिका हुने बताउने सेन्चुरी सामाजिक काममा पनि त्यतिकै मात्रामा खट्छन । उनी समाजिक राजनैतिक रुपमा पछाडी परेका दलित समुदायको हक हित र सहयोगमा पनि उतिकै मात्रामा सकृय छन् । ४ बर्ष अगाडी एक दलित बस्तीको अन्नपूर्ण प्रा.बिलाई जमिन दान गरे आफ्नो मनकारी मन देखाएका थिए । उनले दान दिएको जमिनमा बनेको त्यो विद्यालयमा अहिले विपन्न वर्गका दलित विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
स्कुललाई जमिन दान दिएको भन्दै सो स्कुलले उनलाई २०७० माघमा कदर तथा जन्ताबाट सम्मानित समेत गरेको थियो । जनताले यसरी सम्मान गरिदिदा आफूलाई समाज सेवागर्न झन प्रेरित हुने गरेको सेन्चुरीको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘आफूले गरेको काममा जनताले मुल्याङकन गरि मलाई सम्मान गरेको धेरै खुसि भएको छु । त्यो क्षण म अहिले पनि सम्झीरहेको छु ।’ बिशेष गरी दलित समुदायका बच्चाहरु पढन पाउने बिद्यालयलाई आफु दलित समुदायकै व्यक्ति भएर सहयोग गर्न पाएकोमा निकै गर्भ मशसुस भएको उनको भनाई छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खलनबाट सम्मानित हुदै सेन्चुरी
उनी यति मनकारी छनकी, आफ्नो व्यवसायबाट नाफा कमाएको रकमको १० प्रतिशत रकम सामाजिक सेवामा खर्च गर्दै आएका छन् । व्यवसाय संग संगै सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति नेपाली समाजमा विरलै पाइन्छ तर उनी सामाजिक काम गर्न पाउदा आफूलाई आनन्द आउने बताउँछन् । मानीस सफल हुनको लागि त्याग तपस्या र इमान्दारीताको भुमिका हुने बताउने सन्चुरी आफू आफ्नो काममा दत्तचित भई लागेकाले समाजसेवा गर्न पाएको बताए । उनले भने, ‘जस्को परिणाम आजको सफलता हो ।’ उनी अगाडी थप्छन्, ‘मानव जिवन संघर्ष संघर्षमा अडेको हुन्छ, त्यसमा कहिले सफलता कहिले असफलता प्राप्त हुन्छ । संघर्ष र बिभिन्न उतारचढाव बाट भरिएको जिन्दगीमा कुनै पनि काम गर्न सहज छैन ।
तर पनि आफूसंग जे छ त्यसैमा आत्मसन्तुष्टि भई काम गर्न सक्नेमानस नै सफल हुन्छ ।’ सफल हुनको लागि परिवारको साथ चाहिने बताउने उनी आमाबुबा, श्रीमती तथा परिवारका सदस्यकै कारण आफू यो स्थान सम्म पुगेको बताउछन् । साथ उनी भन्छन्, परिवारको सहयोगले जस्तो सुकै दुख कष्ट पनि सहजै अपनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । सम्मान उनले दजनौ बिभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मान पाईसकेका छन् । सन २००८ मा सर्वोत्कृष्ट उद्यमीलाई प्रधान गरिने स्माल इन्टरप्राइजेज इक्सलेन्स अवार्ड र २०१० मा तेश्रो स्माल इन्टरप्राइजेज एक्सलेन्स अवाडबाट हरि सेन्चुरी सम्मानित भई सकेका छन् ।
त्यस्तै अन्नपूर्ण प्रा.बि सम्मान, साथै अम्बेडकर सम्मान पदक अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार, नेपाल दलित संघ राष्ट्रिय दलित सदनबाट सम्मान, लगाएत बिभिन्न सम्मान पाई सकेका छन् । व्यवसाय र सामाजिक क्षेत्रमा संग संगै लागेका सेन्चुरी भारत, चाईना, थाईल्यान्ड, फान्स, इटाली, स्वीजरल्याण्ड, बेल्जीयम, जर्मन, कोरिया, अमेरिका, हङकङ, स्पेन लगायतका देशको भ्रमण गरिसकेका छन् भने दर्जन बढि भाषामा पनि पोक्त छन् उनी । आफुले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामान बिभिन्न मुलुकमा निर्यात गरी देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो योगदान पुयाउदै आएका उनी देशले सम्मान गर्न लायक व्यक्ति हुन् ।
Posted in मुख्य समाचार, युवा उद्दमी | Tagged ग्लोवल सेन्चुरी, समाज सेवि, हयाण्डिक्रापटका, हस्तकला | Leaveareply